Naya Post Nepal | प्रचण्ड र आरजुलाई रेखाले हा’नि’न् एउटै झ’टा’रो !
प्रचण्ड र आरजुलाई रेखाले हा’नि’न् एउटै झ’टा’रो !
काठमाडौं / राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य एवं नायिका रेखा थापाले नेपाली जनता कसैको ध”म्की’सँग न’ड’रा’उ’ने बताएकी छन्। छोरी नजिताए देश दु’र्घ’ट’नामा’ पर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्र’चण्ड र आफ्नो पार्टीका नेता न’जि’ता’ए बजेट नदिने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाको अभिव्यक्तिमा आ’प”त्ति जनाउँदै थापाले शीर्ष नेताहरुको दा”दा’गि’री”लाई ज’नता’ले ज’वाफ दिने बताइन्।
‘माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मेरी छोरी जि;ति;नन् भने देशमा सं;क;;ट आउँछ भने। उहाँको छोरीमात्रै छोरी, देशका लाखौ दिदीबहिनी छो’री होइनन्?’ शनिबार पोखरामा राप्रपाको चुनावी सभालाई स’म्बो’धन गर्ने क्रममा ने”तृ थापाले प्रश्न गरिन्, ‘आफ्नो छोरी बुहारी र परिवारको लागि राजनीति गर्ने मान्छेलाई नेपाली जनताले पाखा लगाउनुपर्ने बे’ला आएको छ।’
देशभरीका लाखौ छोरीहरुको सवालमा, देशका दाजुभाइको सवालमा नेपाल बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बन्यो भनेर आफूहरुको मनमा चि”न्ता परेको उल्लेख गर्दै थापाले तर शीर्ष नेता भनाउँदाहरु आफ्नो श्रीमतीको लागि छोरीको चि”न्ता”मा सीमित भएको बताइन्। ‘मेरो ‘छोरीले, बुहारीले र पार्टीले जितेन भने बजेट रोक्छु भनेर ध”म्क्या’उँछन्। मेरो पार्टीका नेताले यो ठाउँमा जि’तेनन् भने बजेट पठाउँदैनौं भन्छन्। कतिसम्मको दा’दा’गि”री हो यो? अब पनि नेपाली जनताहरु बन्दी बनिरहने? अब जनता सचेत भइसकेका छन्,’ उनले भनिन्।
थापाले देश बि”गा’र्नमा शेरबहादुर, प्रचण्ड र केपीकोमात्र होइन तिनका पछाडि लाग्ने कार्यकर्ताको पनि हा”त रहे’को बताइन्। ‘देश बनाउन र राष्ट्रिय जोगाउन सही पार्टीलाई ल्याउनुपर्छ। यो सबै कुराको लेखाजोखा स्थानीय तह चुनावबाट गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता धर्म संस्कृति रक्ष जोगाउने जिम्मा नेपाली जनतामा आइपुगेको छ। नेपाली जनता सधै रैती हुन सक्दैन,’ उनले भनिन्।
रोजगारी दिने, महिलाहरुको सुरक्षा दिने एजेण्डा लिएर राप्रपा आएको भन्दै थापाले एकपल्ट सेवा दिने मौका दिन आग्रह गरिन् । अर्कोपल्ट भोट माग्न नआउनेगरी काम गर्ने प्रति’ब”द्ध’ता थियो।
२०७९ बैशाख २४, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 287 Views